तपाईं सैतानलाई जित्न सक्नुहुन्छ! | अध्ययन
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तेलगु थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“विश्वासमा दह्रो भएर [सैतानविरुद्ध] खडा होओ।” —१ पत्रु. ५:९.
सैतानका यी पासोहरूविरुद्ध हामी कसरी खडा हुन सक्छौं?
१. (क) सैतानविरुद्ध लडाइँ गर्नु अहिले किन झनै जरुरी छ? (ख) सैतानलाई जित्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामी किन पक्का हुन सक्छौं?
सैतानले पृथ्वीमा बाँकी रहेका अभिषिक्त जनहरू र “अरू भेडा”-विरुद्ध लडाइँ गर्दै छ। (यूह. १०:१६) त्यसको समय थोरै मात्र बाँकी भएकोले त्यो धेरैभन्दा धेरै यहोवाका सेवकहरूलाई निल्न चाहन्छ। (प्रकाश १२:९, १२ पढ्नुहोस्) त्यसोभए के हामी सैतानलाई जित्न सक्छौं? पक्कै सक्छौं। बाइबल यसो भन्छ, “दियाबलको विरोध गर अनि ऊ तिमीहरूबाट भाग्नेछ।”—याकू. ४:७.
२, ३. (क) मानिसहरूले सैतानको अस्तित्व छैन भन्ने धारणा राख्दा कसरी त्यसलाई नै फाइदा हुन्छ? (ख) सैतानको अस्तित्व छ भन्ने कुरामा तपाईं किन विश्वास गर्नुहुन्छ?
२ सैतानको अस्तित्व छ भन्ने कुरा धेरैलाई हाँसउठ्दो लाग्छ। उनीहरूको विचारमा सैतान र दुष्ट स्वर्गदूतहरू भनेको उपन्यास, भूतको फिल्म अनि भिडियो गेमको काल्पनिक पात्रहरू मात्र हुन्‌। मूर्खहरूले मात्र दुष्ट अदृश्य प्राणीहरू छन्‌ भनेर विश्वास गर्छन्‌ जस्तो उनीहरूलाई लाग्छ। मानिसहरूले सैतान र त्यसका चम्चाहरू केवल दन्त्य कथाका पात्रहरू हुन्‌ भन्ने धारणा राख्दा त्यसलाई केही फरक पर्छ र? पर्दैन। जसले त्यसको अस्तित्वमा विश्वास गर्दैन, त्यस्ता मानिसहरूको दिमागलाई अन्धो तुल्याइदिन त्यसलाई झनै सजिलो हुन्छ। (२ कोरि. ४:४) त्यसले अदृश्य प्राणीहरूको अस्तित्व छैन भन्ने धारणालाई फैलाइरहेको छ र यो पनि मानिसहरूलाई बहकाउन त्यसले प्रयोग गर्ने विभिन्न चालहरूमध्ये एउटा हो।
३ हामी यहोवाका सेवकहरू भने सैतानको बहकाउमा परेका छैनौं। सैतानको अस्तित्व छ भन्ने कुरा हामीलाई थाह छ किनभने सर्प चलाएर हव्वासित बोल्ने सैतान नै थियो। (उत्प. ३:१-५) त्यसले अय्यूबको मनसायमाथि शङ्का गर्दै यहोवाको खिसी गरेको थियो। (अय्यू. १:९-१२) सैतानले नै येशूको परीक्षा गरेको थियो। (मत्ती ४:१-१०) सन्‌ १९१४ मा परमेश्वरको राज्य स्थापना भएपछि पृथ्वीमा बाँकी रहेका अभिषिक्त जनहरूविरुद्ध “लडाइँ गर्न” थाल्ने पनि सैतान नै थियो। (प्रका. १२:१७) त्यो लडाइँ अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसले १ लाख ४४ हजार अभिषिक्त जनहरूमध्ये पृथ्वीमा बाँकी रहेकाहरू र अरू भेडाको विश्वासलाई तहसनहस पार्न खोजिरहेको छ। सैतानलाई जित्न चाहन्छौं भने त्यसविरुद्ध खडा हुनुपर्छ अनि विश्वासमा दह्रो हुनुपर्छ। तर हामी कसरी त्यसो गर्न सक्छौं? अब हामी तीनवटा तरिकाबारे छलफल गरौं।
४. आफू घमन्डी छु भनेर सैतानले कसरी देखाएको छ?
४ सैतान असाध्यै घमन्डी छ। त्यो दुष्ट स्वर्गदूतले यहोवाको शासन गर्ने अधिकारलाई चुनौती दिएको छ र आफूलाई नै ईश्वर तुल्याएर उहाँको ठाउँ लिन खोजेको छ। सैतानजस्तो घमन्डी र अहङ्कारी को छ र? त्यसविरुद्ध खडा हुने एउटा तरिका घमन्ड त्यागेर विनम्र हुनु हो। (१ पत्रुस ५:५ पढ्नुहोस्) तर घमन्ड भनेको के हो? घमन्ड गर्नु सधैं गलत हो त?
५, ६. (क) के घमन्ड गर्नु सधैं गलत हो? व्याख्या गर्नुहोस्। (ख) कस्तो किसिमको घमन्ड गर्नु गलत हो? यस्तो किसिमको घमन्ड देखाएका बाइबलका केही पात्रहरूबारे बताउनुहोस्।
५ एउटा अङ्ग्रेजी शब्दकोशअनुसार घमन्ड गर्नु भनेको “स्वाभिमान र आत्म-सम्मानको भाव” हो अनि “तपाईं वा तपाईंको परिवार अनि साथीभाइहरूले केही राम्रो काम गर्दा वा कुनै सफलता पाउँदा सन्तुष्ट हुने भाव” पनि हो। यस्तो किसिमको घमन्ड गर्नुमा कुनै खराबी छैन। यस्तो उचित किसिमको घमन्डलाई नेपाली शब्दकोशले “गर्व गर्नु” भनेर व्याख्या गरेको छ। पावलले थिस्सलोनिकी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यसो भने, “परमेश्वरका मण्डलीहरूमाझ तिमीहरूमा हामी गर्व गर्छौं, किनभने आफूमाथि आइपरेको सारा खेदो र सङ्कष्ट सहँदै तिमीहरूले सहनशीलता र विश्वास देखाइरहेका छौ।” (२ थिस्स. १:४) त्यसैले अरूले गरेको काममा गर्व गर्नु र आफूमा उचित किसिमको घमन्ड हुनु राम्रै कुरा हो। हामीले आफ्नो परिवार, संस्कृति अथवा हुर्केको ठाउँको कारण सरम मान्नु पर्दैन।—प्रेषि. २१:३९.
६ नेपाली शब्दकोशअनुसार घमन्ड भनेको “आफ्नो बुद्धि, बल र सामर्थ्यलाई बेसी महत्त्व दिएर अरूलाई हेय ठानिने अहम् भावनाको अनुचित तथा उग्र रूप” हो। यस्तो घमन्डले यहोवा अनि अरूसित हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। हामीमा यस्तो अनुचित घमन्ड छ भने कसैले हामीलाई कुनै सल्लाह दिंदा त्यसलाई स्वीकार्नुको साटो त्यो व्यक्ति देखेर हामीलाई रिस उठ्न सक्छ। (भज. १४१:५) यहोवालाई यस्तो घमन्ड मन पर्दैन किनभने यसले आफूलाई अरूभन्दा ठूलो ठान्ने अनुचित भाव जगाउँछ। (इज. ३३:२८; आमो. ६:८) सैतान आफू घमन्डी भएकोले अरू मानिस पनि त्यो जस्तै घमन्डी होस् भन्ने चाहन्छ। अनुचित किसिमको घमन्ड देखाएकोले निम्रोद, फिरऊन अनि अब्शालोम विनाश हुनुपरेको देख्दा त्यो कत्ति रमायो होला! (उत्प. १०:८, ९; प्रस्थ. ५:१, २; २ शमू. १५:४-६) घमन्डले गर्दा नै कयिनको पतन भयो र यहोवासित उसको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। यहोवाले उसलाई सुधार्न खोज्नुभएको थियो तर ऊ घमन्डी भएकोले सुध्रिन चाहेन। यहोवाले उसको आनीबानी सुधार्न दिनुभएको सल्लाह उसले बेवास्ता गऱ्यो अनि नराम्रो काम गर्न कत्ति पनि ढिलो गरेन।—उत्प. ४:६-८.
७, ८. (क) जातिवाद भनेको के हो? यो कसरी घमन्डको एउटा रूप हो? (ख) घमन्डले गर्दा मण्डलीको शान्ति कसरी हराउन सक्छ?
७ आज पनि मानिसहरूले आफू घमन्डी भएको कुरा विभिन्न तरिकामा देखाएका छन्‌ अनि यसको नतिजा भयावह भएको छ। घमन्डले गर्दा नै मानिसहरूमाझ जातीय भेदभाव फैलिन्छ। एउटा शब्दकोशअनुसार “जातिगत पूर्वाग्रह वा भेदभावको भावना” र “हरेक जातिमा फरक-फरक गुण र क्षमता हुन्छ अनि त्यस्तो भिन्नताको आधारमा त्यो जाति स्वतः कि ठूलो कि सानो हुन्छ भन्ने धारणा” जातिवाद हो। जातीय घमन्डले गर्दा हूलदङ्गा र युद्ध मात्र होइन जातीय संहार पनि भएको छ।
८ ख्रीष्टियन मण्डलीमा यस्ता कुराहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन। तैपनि कहिलेकाहीं घमन्डको कारण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीमाझ सुरु हुने विवादले पछि उग्र रूप लिन सक्छ। यस्तो विवाद प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूमाझ पनि भएको थियो। तिनीहरूलाई सोच्न बाध्य पार्ने यस्तो प्रश्न याकूबले सोधे, “तिमीहरूमा लडाइँ कहाँबाट आउँछ? औ झगडा कहाँबाट आउँछ?” (याकू. ४:१) मनमा गडेर बसेको पूर्वाग्रह र आफूलाई ठूलो ठान्ने मनोभावले हाम्रो बोली र कामलाई नराम्रो असर गर्न सक्छ अनि यस्तो बोली र कामले अरूलाई गहिरो चोट पुऱ्याउन सक्छ। (हितो. १२:१८) कुरा स्पष्ट छ, घमन्डले गर्दा मण्डलीको शान्ति हराउन सक्छ।
९. जातिवाद र सबै प्रकारको अनुचित घमन्ड त्याग्न बाइबलले कसरी मदत गर्छ? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
९ आफूलाई अरूभन्दा ठूलो ठान्ने झुकाव हामीमा छ भने “अहंकारी मानिस, सबका सब, परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित छन्‌” भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ। (हितो. १६:५) अरू जात, राष्ट्र र संस्कृतिका मानिसहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ। हाम्रो मनमा जातीय र राष्ट्रिय घमन्डको भावनाले ठाउँ लिएको छ भने परमेश्वरले “एउटै मानिसबाट हरेक जातिलाई बनाउनुभयो” भन्ने सत्यलाई नकारिरहेका हुन्छौं। (प्रेषि. १७:२६) सबै मानिस आदमकै सन्तान भएकोले हामी सबैको जात पनि एउटै हो। त्यसैले कुनै जात ठूलो या सानो हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो। त्यस्तो धारणा राख्यौं भने ख्रीष्टियन प्रेम कमजोर बनाउने र हाम्रो एकता तोड्ने सैतानको दाउपेच सफल पार्न हामीले मदत पुऱ्याइरहेका हुन्छौं। (यूह. १३:३५) सैतानलाई जित्न हामीले सबै प्रकारको अनुचित घमन्ड त्याग्नुपर्छ।—हितो. १६:१८.
भौतिकवाद र संसारको प्रेमबाट अलग रहनुहोस्
१०, ११. (क) हामी संसारलाई प्रेम गर्ने हदसम्म सजिलै पुग्न सक्छौं, किन? (ख) डेमसले कुन अर्थमा संसारलाई प्रेम गरेका हुन सक्छन्‌?
१० सैतान “यस संसारको मालिक” भएकोले यो संसार त्यसैको अधीनमा छ। (यूह. १२:३१; १ यूह. ५:१९) त्यसैले यस संसारले बढवा दिने धेरैजसो कुरा बाइबलको स्तरविपरीत छ। हुन त संसारको सबै कुरा खराब नहोला। तैपनि यस संसारलाई चलाएर सैतानले हाम्रो चाहनाको नाजायज फाइदा उठाउँछ र हामीलाई पापमा फसाउन खोज्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। अथवा त्यसले हामीमा संसारको प्रेम जगाएर यहोवाको उपासनालाई बेवास्ता गर्ने हदसम्म हामीलाई पुऱ्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले सधैं सम्झनुपर्छ।—१ यूहन्ना २:१५, १६ पढ्नुहोस्।
११ प्रथम शताब्दीका केही ख्रीष्टियनहरूले पनि संसारलाई प्रेम गरे। उदाहरणको लागि, पावलले एकपटक यस्तो लेखे, “डेमसले वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागे।” (२ तिमो. ४:१०) डेमसले संसारको कुन कुरालाई प्रेम गरेर पावललाई त्यागेका थिए भनेर बाइबलले तोकेरै त बताउँदैन। हुन सक्छ तिनले यहोवाको सेवालाई भन्दा भौतिक कुरालाई प्रेम गरेका थिए। त्यसो हो भने तिनले यहोवाको सेवामा पाउने विशेष सुअवसर गुमाए। तिनले पावलसँगै सेवा गरेका भए यहोवाबाट थुप्रै आशिष्‌ पाउने थिए। के संसारले तिनलाई यहोवाको आशिष्‌भन्दा पनि ठूलो कुरा दिन सक्थ्यो र?—हितो. १०:२२.
१२. हामी कसरी “धनसम्पत्तिको भ्रामक शक्ति”-को वशमा पर्न सक्छौं?
१२ हामी पनि डेमसजस्तै हुन सक्छौं। हुन त हामीमा आफू र आफ्नो परिवारको लागि भौतिक कुराहरूको प्रबन्ध गर्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो। (१ तिमो. ५:८) यहोवा पनि हामीले जीवनको आनन्द उठाएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले त उहाँले आदम र हव्वालाई सुन्दर बगैंचामा राख्नुभएको थियो। (उत्प. २:९) तर सैतानले “धनसम्पत्तिको भ्रामक शक्ति”-लाई चलाएर हामीमा गलत चाहना जगाउन सक्छ। (मत्ती १३:२२) आनन्दित हुन वा जीवन सफल बनाउन धेरै पैसा र भौतिक सर-साधन चाहिन्छ भनेर थुप्रै मानिसले सोच्छन्‌। वास्तवमा यस्तो सोचाइ भ्रम मात्र हो अनि यसले गर्दा हामीसित भएको सबैभन्दा मूल्यवान्‌ कुरा अर्थात्‌ यहोवासित हामीले गाँसेको मित्रता गुम्न सक्छ। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी होसियार गराउनुभयो, “कोही पनि दुई मालिकको दास बन्न सक्दैन; किनकि उसले एक जनालाई घृणा र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ अथवा ऊ एक जनासित टाँसिनेछ र अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरू परमेश्वर र धनसम्पत्ति दुवैको दास बन्न सक्दैनौ।” (मत्ती ६:२४) यदि हामी धनसम्पत्तिको दास बनेका छौं भने यहोवाको सेवा गर्न छोडिसकेका हुन्छौं। हामीले ठीक त्यसै गरेको सैतान चाहन्छ। पैसा र त्यसले किन्न सक्ने कुराहरूले गर्दा यहोवासित गाँसेको मित्रतालाई कहिल्यै ओझेलमा पर्न नदेऔं। त्यसैले सैतानलाई जित्न हामीले भौतिक कुराहरूप्रति उचित दृष्टिकोण राख्नुपर्छ।—१ तिमोथी ६:६-१० पढ्नुहोस्।
अवैध यौनसम्बन्धलाई तिरस्कार गरौं
१३. यस संसारले विवाह र यौनबारे कस्तो गलत दृष्टिकोण राखेको छ?
१३ सैतानको संसारको अर्को पासो भनेको अवैध यौनसम्बन्ध हो। आज थुप्रै मानिसले श्रीमान्‌ र श्रीमती एकअर्काप्रति वफादार हुनु पुरानो जमानाको कुरा हो भन्ने सोचाइ राख्छन्‌ अनि विवाह गर्नु भनेको फन्दामा पर्नु हो भन्छन्‌। उदाहरणको लागि, एक जना प्रसिद्ध अभिनेत्रीले यसो भनिन्‌, “एक जनासित मात्र यौनसम्बन्ध राख्नु केटा र केटी दुवैको लागि असम्भव कुरा हो। मैले आजसम्म त्यस्तो जोडी भेटेकै छैनँ, जो जिन्दगीभर एकअर्काप्रति वफादार हुन्छन्‌ वा हुन चाहन्छन्‌।” अर्को एक जना अभिनेताले चाहिं यसो भने, “एकै जनासित जिन्दगी बिताउने गरी हामी बनिएकै होइन जस्तो मलाई लाग्छ।” प्रख्यात मानिसहरूले नै विवाहलाई परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो भनी नस्वीकार्दा सैतान खुसी हुन्छ। यहोवाले गर्नुभएको विवाहको प्रबन्धलाई सैतानले समर्थन गर्दैन अनि यो प्रबन्ध सफल भएको हेर्न पनि चाहँदैन। त्यसैले सैतानलाई जित्न हामीले यहोवाको प्रबन्धलाई समर्थन गर्नुपर्छ।
१४, १५. अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने प्रलोभन आउँदा कसरी प्रतिकार गर्न सक्छौं?
१४ चाहे हामी विवाहित होऔं वा अविवाहित, हामीले सबै किसिमको अवैध यौनसम्बन्धलाई तिरस्कार गर्न हर प्रयास गर्नै पर्छ। तर त्यसो गर्नु पटक्कै सजिलो छैन। तपाईं किशोरावस्थामा हुनुहुन्छ भने स्कुलका साथीहरूले रमाइलोको लागि मात्र कसैसित यौनसम्बन्ध राखेको वा कसैलाई ‘सेक्सटिङ’ गरेको कुरामा धाक लगाएको सुन्नुभएको छ होला। ‘सेक्सटिङ’ भनेको मोबाइलमार्फत कामुक सन्देश, तस्बिर अथवा भिडियो पठाउनु हो र यसलाई कुनै-कुनै ठाउँमा बाल अश्‍लीलतामा मुछिनु जत्तिकै गम्भीर अपराधको रूपमा हेरिन्छ। बाइबलले बताएअनुसार “जसले अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेगर्छ, उसले आफ्नै शरीरविरुद्ध पाप गरिरहेको हुन्छ।” (१ कोरि. ६:१८) अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने थुप्रै मानिस विभिन्न प्रकारका यौन रोगको सिकार भएका छन्‌। यसले गर्दा कतिपयले पीडा खप्नुपरेको छ र जीवनसमेत गुमाउनुपरेको छ। विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध राखेकोमा थुप्रै युवाहरू पछुताएका छन्‌। मनोरञ्जन जगत्‌ले अवैध यौनसम्बन्धलाई सामान्य रूपमा देखाएको छ तर त्यस्तो सम्बन्ध राख्दा भयावह नतिजा भोग्नुपर्ने हुन्छ। मनोरञ्जन जगत्‌ले यौनसम्बन्धी परमेश्वरको नियम पालन नगरे पनि केही हानि हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन खोज्छ। तर हामीले सैतानको झूट पत्यायौं भने “पापको भ्रामक शक्ति”-को वशमा परिरहेका हुन्छौं।—हिब्रू ३:१३.
१५ अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने प्रलोभन आउँदा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? आफूमा त्रुटिपूर्ण झुकाव छ भन्ने कुरा मानिलिनुहोस्। (रोमी ७:२२, २३) बलको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। (फिलि. ४:६, ७, १३) अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने हदसम्म पुऱ्याउन सक्ने परिस्थितिहरूबाट जोगिनुहोस्। (हितो. २२:३) अनि त्यस्तो प्रलोभन आउँदा तुरुन्तै प्रतिकार गर्नुहोस्।—उत्प. ३९:१२.
१६. सैतानले लालच देखाउँदा येशूले के गर्नुभयो? उहाँको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
१६ प्रलोभनको प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमा येशूले उत्कृष्ट उदाहरण बसाल्नुभएको छ। सैतानले उहाँलाई झुक्याउन विभिन्न कुराको लालच देखायो। तर उहाँ लोभमा पर्नुभएन र त्यसले भनेको कुरा मान्दा कस्तो फाइदा हुन्छ वा कस्तो बेफाइदा हुन्छ भनेर एकछिन पनि सोच्नुभएन। बरु उहाँले तुरुन्तै यसो भन्दै जवाफ दिनुभयो, “यस्तो लेखिएको छ।” (मत्ती ४:४-१० पढ्नुहोस्) येशूलाई परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा राम्ररी थाह थियो। त्यसैले प्रलोभन आउँदा उहाँले तुरुन्तै कदम चाल्न सक्नुभयो अनि शास्त्रपद उद्धरण गर्दै सैतानलाई मुखभरिको जवाफ दिन सक्नुभयो। सैतानलाई जित्न चाहन्छौं भने अवैध यौनसम्बन्ध राख्ने प्रलोभनको प्रतिकार गर्नै पर्छ।—१ कोरि. ६:९, १०.
सहनशील भयौं भने सैतानलाई जित्न सक्छौं
१७, १८. (क) सैतानसित अन्य कस्ता हतियारहरू छन्‌? यो कुरा थाह पाउँदा हामीले किन अचम्म मान्नुपर्दैन? (ख) सैतानको भविष्य कस्तो छ? यो कुराले तपाईंलाई सहनशील हुन कसरी मदत गर्छ?
१७ यस लेखमा हामीले सैतानले चलाउने तीनवटा हतियार घमन्ड, भौतिकवाद र अवैध यौनसम्बन्धबारे छलफल गऱ्यौं। तर त्यससित अरू हतियार पनि छन्‌। उदाहरणको लागि, केही ख्रीष्टियनहरूलाई परिवारबाट विरोध आउँछ अनि कसै-कसैलाई चाहिं साथीहरूले खिसी गर्छन्‌। कुनै-कुनै देशमा भने सरकारले नै प्रचारकार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्ता कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा हामीले अचम्म मान्नुपर्दैन किनकि येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई यसरी सजग गराउनुभएको थियो, “तिमीहरू मेरा चेला भएकाले सबै मानिसहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्‌; तर जसले अन्तसम्म सहन्छ, त्यसले उद्धार पाउनेछ।”—मत्ती १०:२२.
सैतानलाई सदाको लागि नाश गरिन्छ (अनुच्छेद १८ हेर्नुहोस्)
१८ हामी सैतानलाई कसरी जित्न सक्छौं? येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्नुभयो, “तिमीहरूले सह्यौ भने आफ्नो ज्यान बचाउनेछौ।” (लूका २१:१९) हामीलाई हानि पुऱ्याउन मानिसले जेसुकै गरे पनि त्यसको असर सधैंभरि रहँदैन। हामी आफैले बाहेक अरू कसैले पनि यहोवासित हाम्रो मित्रता तोड्न सक्दैन। (रोमी ८:३८, ३९) सैतानले यहोवाको कुनै सेवकलाई माऱ्यो नै भने पनि त्यो त्यसको जित होइन किनकि यहोवाले आफ्नो सेवकलाई फेरि जीवन दिन सक्नुहुन्छ। (यूह. ५:२८, २९) अर्कोतर्फ सैतानको भविष्य अन्धकारमय छ। यहोवाको स्तरअनुसार नचल्ने यो संसार नाश भएपछि त्यसलाई एक हजार वर्षको लागि अगाध खाडलमा हालिनेछ। (प्रका. २०:१-३) येशूको हजार वर्षीय शासनपछि सैतानलाई केही समयको लागि “कैदबाट मुक्त गरिनेछ” अनि त्यसले त्रुटिरहित मानिसहरूलाई बहकाउने अन्तिम मौका पाउनेछ। त्यसपछि त्यसलाई नाश गरिनेछ। (प्रका. २०:७-१०) सैतानको लागि भविष्यको कुनै आशा छैन तर हाम्रो लागि भने छ। त्यसैले विश्वासमा दह्रो भएर त्यसविरुद्ध खडा हुनुहोस्। तपाईं सैतानलाई अवश्य जित्न सक्नुहुन्छ!